Lee Madrid Barça Mac | Esi m mac
Izu ụka a na-abịa otu n'ime egwuregwu kachasị atụ anya maka ndị niile hụrụ ihe ha kpọrọ eze egwuregwu, Madrid Barça. Ọtụtụ n'ime unu ga-anọ n'ihu Mac n'oge egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na ọ dabara na ị nwere ezigbo njikọ ọ ga-ekwe omume ile egwuregwu ahụ na Mac.
Ihe bụ eziokwu bụ na anyị na-eche ihu egwuregwu nke afọ na ọtụtụ ndị na-akwado ya ma ọ bụghị ya mere ndị na-agba bọl ga-achọ ịhụ egwuregwu ahụ ka ọ dịrị ndụ. Nke a bụ nsogbu ma ọ bụrụ na anyị enwetaghị nke ọ bụla ọrụ ndenye aha ịkwụ ụgwọ ọrụ na-agbasa egwuregwu a, ma ọ gaghị ekwe omume.
2 Ọwa mba ọzọ
Yomvi, nke sitere na Canal +, bụ nke Movistar + ugbu a ma nke a pụtara usoro mgbanwe ndị na-emeghị ka m kwenye kemgbe, agbanyeghị na enwere ike ịzụta egwuregwu ahụ kpọmkwem na Yomvi (ihe dị ka euro 10, echere m na m na-echeta) na-enweghị iku ihe obula ugbu a, ọ gaghịzi ekwe omume.
Ga-emetụ anyị aka kwụọ ụgwọ ọnwa nke Movistar + Ejirila ya akara na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-arụ ọrụ zuru oke iji lelee egwuregwu site na Mac, PC, iOS ma ọ bụ ngwaọrụ gam akporo, na-ahapụ smart TV. Nhọrọ a dị mma iji lelee egwuregwu ahụ mana ọ nweghịzi mma n'ihi eziokwu ahụ na ị ga-ewepụta ọrụ ọnwa niile.
Ọwa mba ọzọ
Egwuregwu a bụ n'ezie mgbasa ozi ma na-agbasa na ọtụtụ ọwa mba ọzọ dị ka Fox Sports na Italytali, SkySports, Sport TV na Portugal ma ọ bụ Bein Ñ, nke bụ egwuregwu na Spanish na USA. Nsogbu a na - ejikọtakarị na eziokwu na ọwa ndị a anaghị agbasa na mpụga mba ebe ọwa ahụ si, mana enwere ụfọdụ nhọrọ ga - enyere gị aka ile ya anya n'ụdị kachasị dị ọcha mgbe Netflix adịghị na Spain.
N'ime nhọrọ a enwere ọtụtụ nhọrọ na otu n'ime ha bụ ọdịnaya dị ala nke enyere site na njikọ dị na mpụga yana nke anaghị achọ mmemme nke atọ ma ọ bụ sọftụwia ọzọ na nke anyị nwere na Mac ma e wezụga Flash Player. Mana o doro anya ma ọ bụrụ na anyị nwere ụfọdụ ngwa mgbakwunye ma ọ bụ ngwanrọ mpụga àgwà ahụ dịwanye mma, ojiji nke Veetle nke bụ ngwa mgbakwunye arụnyere na ihe nchọgharị anyị na-arụ ọrụ zuru oke na Safari ma ọ bụ ọbụna Sopcast.
Ihe bụ nsogbu bụ na egwuregwu ndị a na ndị dị otú ahụ na-ege ntị na-agbanye saturate njikọỌzọkwa, nsogbu ọzọ bụ nke mmechi nke Rojadirecta awa ole na ole tupu egwuregwu ahụ gachaa lee ihu ibe gị n’ụlọ ikpe na Canal + awa ole na ole mgbe okuku ahụ kwụsịrị. Nhọrọ onwe gị na mgbakwunye na ịnwe ike ịhụ ya na Mac na nkwekọrịta Movistar + bụ ịbịakwute ụlọ mmanya ahụ na ndị enyi gị ma haveụọ mmanya mgbe ị na-enwe mmasị na-ele egwuregwu ahụ, nke a nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma ma jiri ya mee ihe taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Esi lelee Madrid Barça na Mac gị
Esi lelee ọnọdụ batrị nke MacBook gị